Ukubuka ulwandle i-Mezzanine Loft! I-Air-con Pool Gym & Squash - I-Airbnb
Ukubuka ulwandle i-Mezzanine Loft! I-Air-con Pool Gym & Squash
I-loft yonke sinombuki zindwendwe onguIan
I-90% yeendwendwe zakutshanje inike uIan iinkwenkwezi eziyi-5 kunxibelelwano.
I-Mezzanine loft ipholile ngokugqibeleleyo, ikhitshi elinento yonke, i-mezzanine kwigumbi lokulala kunye ne-balcony enembonakalo entle ukuya elunxwemeni. Iindwendwe ziyakwazi ukusebenzisa ijimu (ayivumelekanga ngenxa ye-covid), i-grill (imali eyongezelelekileyo), ipuli yokuqubha. Imizuzu eyi-3 yokuya elunxwemeni.
Phakathi kwesikhululo seenqwelo-moya (N) kunye nePelourinho/Barra (S). Ukufikelela lula kwi-Piatã, i-Flamengo kunye nolunye ulwandle ukuya eMntla okanye ukuhlola umculo, izakhiwo kunye nokutya kwesixeko esidala.
Ukubhalisa xa ufika kungokoqobo. kodwa kuxhomekeke kwezinye iindawo ezibhukishiweyo. Yazisa kwangaphambili! Ukuphuma kunokutshintshwa kwisicelo ngasinye!
Iflethi encinci enefenitshala eyenziwe ngendlela ekhethekileyo nezixhobo zale mihla. Ukusuka kwigumbi lokulala okanye igumbi lokuhlala ufumana eyona ndawo intle kunye nebhalkoni enkulu, ngokukhethekileyo kwii-moons ezipheleleyo.
Ndinikezela ngazo zonke izinto eziyimfuneko ukuze uhlale: i-intanethi ye-10mb, ikhitshi elinefriji evulekileyo yale mihla, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu, isixhobo sokubetha iinwele, iayini, umatshini wokuhlamba impahla, ii-squash racket neebhola, izitulo zaselwandle.
!!! Ifoto ephambili iphelelwe lixesha, khangela ifoto * ekumgangatho ophantsi * efakwe kwigalari ebonisa ibhedi ekwayisofa entsha (engekho ntle). Ndilindele ukubuza ngomfoti oyingcali kwakhona.
I-Promenade ilungele izinto ezenziwayo: ukubaleka, ukuhamba, ukuhamba ngephenyane elide nokuqhuba ibhayisekile. Ukongezelela, ungasebenza kakuhle.
Qaphela ukuba iArmação njengezinye iindawo zaseSalvador, ayinconyelwanga ukuba uhambahambe ngexesha lasemva kwexesha kwaye ungabonisi izixhobo zakho okanye usenokungaphindi uzibone.
Yiba nobulumko ngoxa uhambahamba eSalvador kwaye kuxhomekeke kwixesha ofika ngalo/ohamba ngalo ngamanye amaxesha kubhetele uthathe i-cab.
Andihlali kufutshane kodwa ndisoloko ndifumaneka ngefowuni okanye ngee-app zemiyalezo endiyithandayo. Ngaphezu koko, omnye wabafana bam okanye umama wam uza kukunika inkxaso efunekayo.